कागजविहीन प्रविधिमा आधारित क्षयरोगसम्बन्धी स्थलगत सर्वेक्षण कार्य अन्तिम चरणमा - Health Today Nepal
कागजविहीन प्रविधिमा आधारित क्षयरोगसम्बन्धी स्थलगत सर्वेक्षण कार्य अन्तिम चरणमा
काठमाडौ,९ चैतः क्षयरोगीको संख्या पत्ता लगाउन पहिलो पटक कागजविहिन प्रविधिमा आधारित रहेर गरिएको स्थलगत सर्भेक्षण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपालमा क्षयरोगको अवस्था कस्तो छ ? बिरामी निको हुने दर कस्तो छ ? नयाँ बिरामी थपिने दर कस्तो छ ? नयाँ र पुराना क्षयरोगी कति छन् ? उपचार विधिमा सुधार गर्नुपर्ने विषय लगायतका कुरा पत्ता लगाउन कागजविहिन प्रविधिमा आधारित रहेर राष्ट्रिय क्षयरोग सर्वेक्षण थालिएको थियो । राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रले सन् २०१७ बाट सर्भे सुरु गरेको हो ।
नेपालमा पहिलो पटक ५५ जिल्लाका ९९ क्षेत्र (क्लस्टर) मा ५७ हजार ६१० व्यक्तिमा कागजविहीन प्रविधिमा आधारित भई गरिएको उक्त रोगको स्थलगत अध्ययनको ८० प्रतिशत कार्य पूरा भएको राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रले जनाएको छ । नेपालमा क्षयरोगको निवारण कार्यक्रम शुरु भएको ६० वर्षभन्दा बढी अवधि पूरा भईसकेपनि यो अवधिमा सरकारले यस क्षेत्रमा खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन् । केन्द्रका गतिविधिका बारेमा जानकारी दिन शुक्रबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रका निर्देशक डा. भीमसिंह तिङ्करीले भनेः‘आगामी दिनमा क्षयरोगका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्थलगत अध्ययन कार्यको नतिजाले कोशेढुङ्गाको काम गर्नेछ ।’
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष ४५ हजार नयाँ क्षयरोगीका बिरामी थपिन्छन् । कूल मृत्यु हुने रोगमध्ये क्षयरोग १० नं भित्र (टप टेन) पर्ने गर्दछ । हाल बर्षेनी पाँच हजारदेखि छ हजार मानिसको ज्यान यही रोगले लिने गरेको तथ्याङ्क छ । नेपालमा क्षयरोगीका बिरामी पत्ता लगाउने दर प्रतिलाख ११२ रहेको छ । केन्द्रका अनुसार गत आव २०७४÷७५ मा एक लाख ९६ हजार ३६३ मा क्षयरोगको आशङ्का गरिएको थियो । तीमध्ये खकार परीक्षण गर्दा ३२ हजार ४७४ मात्र उपचारको पहुँचमा आएका थिए । नयाँ क्षयरोगीका १३ हजार बिरामी पत्ता लगाई उपचारको पहुँचमा ल्याउन सरकारलाई अहिले प्रमुख चुनौती बनेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार कूल क्षयरोगीमध्ये १५ देखि २० प्रतिशतसम्म निजी क्षेत्रका अस्पतालमा सेवा लिन जान्छन् । तर निजी क्षेत्रले उपचार गरेका ती बिरामीको तथ्याङ्क सरकारलाई दिँदैनन् । हालै जारी भएको जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ मा निजी अस्पतालले क्षयरोगका बिरामीको अनिवार्य तथ्याङ्क स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ । मन्त्रालयले क्षयरोग निवारणका लागि वार्षिक रुपमा रु ६७ करोड खर्च गर्ने गर्दछ । हाल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीमार्फत चार हजार ३२३ उपचार केन्द्रबाट स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानी विधि (डट्स) उपचार सेवा, क्षयरोग पत्ता लगाउन खकार परीक्षण गर्न ६०४ प्रयोगशाला र ५६ जिन एक्सपर्ट केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ ।
केन्द्रका निर्देशक डा तिङ्करीले क्षयरोगको २० महीने लामो उपचार अवधिलाई घटाएर ९ देखि १२ महीनाको नमूना उपचार सेवा शुरु गरिएको जानकारी दिए । पहिलो चरणमा लागू भएको नमूना परीक्षण सफलता प्राप्त गरेका देशभरि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउनेछ । सरकारले क्षयरोग उपचार सेवा निःशुल्क बनाएको छ । उपचारमा सहजता ल्याउन बिरामीलाई रु ३ हजार यातायात खर्चसमेत दिँदै आएको छ । सात प्रदेशमध्ये गण्डकी प्रदेशमा क्षयरोग उपचारको सेवा अति प्रभावकारी रहेको छ । प्रदेश नं २ मा सबैभन्दा वढी क्षयरोगीका सङ्ख्या रहेको छ ।
Previous article मन्त्रिपरिषद्बाट स्वास्थ्य बीमा नियमावली पारित
Next article लक्षित वर्गको पहुँचमा पुग्न सकेन स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले गरेको लगानी